रोचक – Page2– Karnalikhabar
तपाईँलाई थाहा छ, कतिपय सफलताका सुत्रहरु गोप्य नै राखिन्छन् । ठूलो संघर्ष गरेर सफल भएका धनाढ्यहरु आफ्नो प्रतिष्पर्धामा अरु नआउन् भन्ने धारणा राख्ने भएकाले आफ्नो सफलताका सुत्रहरु प्रचार गर्दैनन् । यद्यपि, ठूलाठूला
ती महिला जब अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् तब डाक्टरदेखि लिएर नर्ससम्म सबै हैरान थिए । उनको पेट देख्दा सबैले ठाने कि उनको पेटमा कम्तीमा पनि १० वटा बच्चा छन् । तर जब उनको पेटको अल्ट्रासाउण्ड गरेर रिपोर्ट हेरियो तब सबै झसंगै भए । यो घटना
परालको रंगशाला बनाएर एक व्यक्ति चर्चामा….!!! हेर्नुहोस अचम्म लग्दो छ
एक व्यक्तिले परालको रंगशाला बनाएर अहिले चर्चाको शिखरमा छन् ।रोमन पोनोमारयोभले ‘तीन साना सुंगुर’नामक एक दन्त्यकथामा आधारित भएर सेन्ट पिटर्सबर्गस्थित नयाँ रंगशालाको एउटा पराले नक्कल उतारेका हुन्। ४ सय ५ थान परालका टौवा
रहस्यमय खाल्डो: स्थानीयवासी भन्छन् नर्कको द्वार हो, वैज्ञानिक भन्छन् भूत, वर्तमान र भविष्य
एजेन्सी। साइबेरियाको याना नदीको घाँटीसंगैको एक जंगलमा अजीव खाल्डो छ। यसलाई बाटागैका क्रेटरको नामले चिनिन्छ। यो करिब १ किलोमिटर लामो, ८५ मिटर चौडा र २८३ फिट गहिरो छ। तर यो आंकडा छिट्टै बदलिनसक्छ किनकी यो तीव्ररुपमा बढ्दै छ।
श्रीमती अन्तै सल्केको कसरी थाहा पाउने ?
#मोबाईल : तपाईंको श्रीमती फोनमा कत्तिको झुन्डिन्छिन् ? तपाईँको अगाडि फोन आउँदा उनको हाउभाउमा कुनै परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन ? बारम्बर फोन आइरहने फोन, स्वरको परिवर्तन, मेसेज गर्ने प्रवृत्तिहरुले पनि तपाईंले श्रीमतीले दिइरहेको छ
गाई जात्रा २०७४
उपत्यका लगायतका देशका विभिन्न ठाउँहरुमा भाद्र कृष्ण प्रतिपदाका दिन गाई जात्रा पर्व धुमधामका साथ मनाउने गरिन्छ । दिवङ्गत आफन्तहरुको सम्झना गर्ने तथा उनीहरुलाई आत्मशान्ति मिल्ने विश्वासस्वरूप गाइजात्रा पर्व मनाउने गरिएको
चराको एउटा अण्डा भित्रबाट जुम्ल्याहा चल्ला कोरलिएको कहिल्यै सुन्नुभएको छ ? अहिलेसम्म सुनिएको थिएन । तर क्यानडामा यो घटना भएको छ । क्यानडामा एउटा हाँसको अण्डाबाट जुम्ल्याहा चल्ला निस्केका छन् । दुःखद कुरा के भने यी
लुगा लगाएर जान नपाइने अचम्मको होटेल
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, साउन २०, २०७४
विश्वमा अनौठा अनौठा स्थान छन् । जुन सुन्दा पत्यार लाग्दैन तर वास्तविक हुन् । यस्तै पत्याउन नसकिने एउटा होटल बेलायतमा रहेको छ । जुन होटल प्रवेश गर्दा ग्राहक नांगै हुनुपर्ने छ । गत वर्ष खोलिएको होटलको नाम ‘द बुनियादी’ हो । जहाँ
कसरी बढाउछ भियग्राले सेक्स पावर ? के के छन यसका फाइदा र बेफाइदा ?
भियग्राले यौनांगमा नाइट्रिक अक्साइडको कामलाई बढावा दिन्छ । यसले पुरुष यौनांगको मांसपेशी खुकुलो बनाइदिन्छ । जसका कारण रक्तप्रवाह बढ्न गई यौनांगको कमलो तन्तु बिस्तारै लट्ठीजत्तिकै कडा र दह्रो हुँदै आउँछ अर्थात् उत्तेजना
विज्ञानलाई चकित पार्दै १०१ वर्षकी हजुरआमाले दिइन् स्वस्थ बच्चाको जन्म
एजेन्सी । १०१ वर्षकी हजुरआमाले बच्चाको जन्म दिएर विज्ञानलाई समेत आश्चर्यचकित बनाएकी छन्। इटलीकी ती वृद्धाले १०१ वर्षको उमेरमा १७ औँ सन्तानलाई जन्म दिएकी हुन्। उनले यो कुराको सावित गरेकी छन् की महिलाको प्रजनन क्षमतालाई उमेर